यौन सम्पर्कमा समस्या छ ? 'परिधीय धमनी रोग' पनि हुन सक्छ ! | Hamro Doctor News
यौन सम्पर्कमा समस्या छ ? 'परिधीय धमनी रोग' पनि हुन सक्छ !
By डा. संदीपराज पाण्डे
मुुटुमा रगत सञ्चार गर्ने तिन वटा रक्त धमनी (पेरिफेरी आर्टरी )मा कुनै कारणबस् अवरोध भएमा वा आर्थेरोस्केलेरोसिसलाई मुटुको परिधीय धमनी रोग (पेरिफेरीयल आर्टरियल डिजिज) भनिन्छ ।
यो रोगलाई भासकुलर परिधीय धमनी रोग पनि भनिन्छ । यस रोगलाई मानिसहरु सामान्य ठान्छन् किनभने यस रोगको लक्षणनै सामान्य तरीकाले देखिन्छ । हातखुट्टा दुख्नु यसको प्रमुख कारण हो जून मानिसहरु सामान्य सम्झी अन्य सामान्य औषधि वा 'पेन किलर'को प्रयोग गर्छन जुन ज्यादै खतरनाक हो ।
हाम्रो शरीरमा मुटुले आफ्नो धमनी मार्फत रक्त सञ्चार गर्दछ तर कहिलेकाहि रक्त सञ्चार पक्रियामा अवरोध आई हात खुट्टामा रगतको प्रवाह नहुने अवस्था नै परिधीय धमनी रोग हो । अर्थात हातखुट्टा लगायत शरीरका अन्य अंगमा रगतको प्रवाह नहुनु हो ।
यो रोग लागेपछि रोगीको हातखुट्टाले प्रशस्त मात्रामा जति चाहिने हो त्यति रगत प्राप्त गर्न सक्दैन र हिंड्डुल वा घरायसी सामान्य काम गर्दा पनि निकै पिडा र कष्ठ हुने गर्दछ । शरीरमा हुने मोटोपन, क्लोरष्टेल, क्याल्सियम, रेशा जस्तो स्नायु आदिका कारण मुटुको रक्त धमनी धातुको पाता वनेपछि धमनीले रक्त सञ्चारको प्रवाह गर्न छोड्छ ।
यो रोगले विषेशगरी रोगीको हात र खुट्टालाई वढि असर गर्छ ।
लक्षणहरु के के हुन् ।
हिंड्डुल गर्दा हात खुट्टा वेस्सरी दुख्ने ।
हात खुट्टामा घाउ आउने ।
हात खुट्टाको छाला मरेर जाने ।
यौन सम्पर्कको समयमा जिउ चांडै गल्ने ।
कम्मर कठ्याङ्ग्रिनु र दुख्नु ।
हात खुट्टा चिसो हुनु ।
हात खुट्टाको रगं परिवर्तन हुनु ।
हात खुट्टा बाउंडिनु ।
हात खुट्टाको नङ्ग चांडै बढ्नु । आदि
कारणहरु के के हुन्
अधिक धुम्रपान गर्ने ।
उच्च क्लोरष्टेलको मात्रा
उच्च क्याल्सियमको मात्रा ५० वर्षभन्दा वढि उमेर रक्त धमनीहरु अन्य कुनै कारणवस् सुन्नियमा उपचार विधि डाक्टरको प्रत्यक्ष्य निगरानीमा यो रोगको उपचार गर्न सकिन्छ ।
उपचारको प्रक्रिया निम्न छन्
ए.बि.आई उपचार पद्धति
डपलर उपचार पद्धति
एङ्गियो उपचार पद्धति (सि.टि स्क्यान, एम.आरआई)
ओपन शल्यक्रिया र औषधिको सेवन ।
Last modified on 2016-04-09 17:03:59